भाइरस खोज्दै घरमा आउदैन – हामी खोज्दै भि,डभाडमा नजाउँ
यलु जोशी, काठमाडौं । भूकम्पको समयमा मानिसको तन हल्लिएको थियो अहिले कोरानाको कारणले मन । भूकम्प र ना,काबन्दी झेलेका नेपालीहरुले अब कोरोनालाई समेत हराउन सरकारले लगाएको लक डाउनको पुरै सर्मथन गरेका छन् । नेपालीहरु सेल्फ क्वारेनटाइनमा बसिरहेका छन् । अहिले कोरोना (कोभिड १९) को त्रासबाट विश्वकै जनजीवन अस्तव्यस्त छ । विकसित र अविकसित देशसँगै सबैजसो वर्गका व्यक्तिहरु कोरोनाको डरबाट आतङ्कित बनेका छन् । जसको कारण धेरैलाई मानसिक रोगको सामना गर्नु परेको छ ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका मानसिक रोग विभागका प्रमुख डा. रवि शाक्यले कोरोना सं,ङक्रमणको कारण मानसिक रोग बढेको बताउनुहुन्छ ।
कोरोनाको सङक्रमण हुने डरले धेरै नेपालीहरु अतालिरहेका छन् । कोरोना लाग्ने वित्तिकै मर्छ भन्ने भ्रमबारे जनचेतना आवश्यक रहेको डा. शाक्यको बताउनुहुन्छ । उहाँले सरकारले बाहिर निस्कन नपाउने नियम लागु गरेसँगै यो संक्रमण फैलिने डर कम भएको बताउदै थप्नुभयो, – मानसिक स्थितीलाई बलियो बनाउनुको साथै आफुले सुरक्षित हुने विधि अप्नाए यो रोग लाग्ने सम्भावना न्युन हुन्छ ।